कसरी हुन्छ मिर्गौलाको संक्रमण, हुन नदिन के गर्ने ? - Jhapa Online
‘इ कोली’ नामक ब्याक्टेरिया पिसाब बग्ने ट्युबमा पुगेपछि मिर्गौलाको संक्रमण हुन्छ । ब्याक्टेरिया ब्लाडरसम्म पुगेर सिस्टाइटिस हुन्छ र मिर्गौलासम्म पनि पुग्न सक्छ । इ कोली दिसा गर्ने अंगमा हुन्छ र, त्यहाँ रहँदा कुनै असर पुर्‍याउँदैंन । तर, यौन सम्पर्कका दौरान या दिसा पुछ्दा या धुँदा मूत्रमार्गमा पुग्न सक्छ । मिर्गौलाको संक्रमण हुने अरु पनि कारण छन् ।
मुत्राशयको संक्रमणबिना पनि मिर्गौलाको संक्रमण हुन सक्छ । यदि मिर्गौलाको पत्थरी छ, मधुमेह छ या रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर छ भने पनि मिर्गौलाको सक्रमण हुन सक्छ । मिर्गौलाको संक्रमण कुनै पनि उमेर समूहका मानिसलाई हुन सक्छ । यद्यपि विशेषगरी महिलाहरु यसबाट बढी प्रभावित हुन्छन् । किनभने, महिलाको दिसा गर्ने अंग र युरेथ्रा नजिकै हुन्छ र ब्याक्टेरिया सजिलै मुत्रमार्गमा प्रवेश गर्ने सम्भावना रहन्छ । अझ यौनका हिसाबले बढी सक्रिय हुने उमेरका युवतीहरु बढी जोखिममा हुन्छन् ।
– कब्जियत हुन नदिने, कब्जियतले पनि युटिआई गराउँछ, आदि । (स्रोतः नेसनल हेल्थ सर्भिस, बेलायत)
गौरादहमा हात्तीपाइले रोग सम्बन्धि १ दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न
मिर्गौला पीडित दीपक शिवा बचाऊ अभियानमा रकम जुट्दै
घरमा आफैँले बनाएर खान सकिन्छ हर्लिक्स, तर कसरी बनाउने ? यी हुन् बनाउने तरिकाहरु: